Senior Office Staff (HR Department)Female Only
Career Opportunities: Management Potentials
HR Assistant ပြုစုထားသော ၀န်ထမ်းများ၏ ရုံးတက်ရုံးဆင်းမှတ်တမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ 	ခွင့်လက်ကျန်များ စစ်ဆေးရန်၊ လစာမဲ့ခွင့်ယူသည့် ၀န်ထမ်းများ၏ စာရင်းမျ...
Office Staff (Admin/HR)
Benefits: - Overtime payments - Annual bonus
Highlights: - Fun working environment - Joinawinning team - You can makeadifference
* ရုံးစာများ ကျွမ်းကျင်ရမည်။ * စာ၇ွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ * နေ့စဉ်ရုံးတတ် ရုံးဆင်းအချိန်များကို စာရင်းပြုစုပေးရမည်။ * ခွင့်မှတ်တမ်းများ...
Office Staff (Shwe Pyi Thar)
-Forwards information by receiving and distributing communications; collecting and mailing correspondence; copying information. - Serves customers by ...
Benefits: Bonus over performance
· The Receptionist will be responsible to manage Beauty Salon front desk onadaily basis and to performavariety of administrative tasks. · ...
Office Staff (Warehouse)Male)Shwe Pyi Thar Factory
Benefits: * Annual Bonus
- မြတ်ပန်းခင်၊ ဆောင်းနှင်းဖြူအတွက် ထုတ်ပေးသော ပစ္စည်း အ၀င်/အထွက်စာရင်းများ (Delivery Order Form, Good Transfer Form) ဖွင့်ပေးခြင်း။ - Good Return များ ...
Office Staff (Female Only) Shwe Lin Pann Factory